Estos renders muestran al detalle cómo será el HTC One M9 / HTC Hima | Androidsis
ဖြည်းဖြည်း HTC သည်၎င်း၏ဈေးကွက်ဝေစုကိုပြန်လည်ရယူနေသည်။ One Series ၏အောင်မြင်မှုသည်ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူ၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၏အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်သည်။ ငါတို့သိတယ် မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် HTC သည်ဆက်ခံသူအား HTC One M1 ကိုတင်ဆက်လိမ့်မည်၊ HTC One M9 သို့မဟုတ် HTC Hima ။
ယခုအခါ Phone Designer မှယောက်ျားများသည်သူတို့၏ Facebook ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ပြန်ဆိုထားသောစီးရီးများကိုထုတ်ဝေလိုက်ပြီဖြစ်သည် HTC One M9 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ ၎င်းသည်နောင်လာမည့် HTC flagship အတွက်ပြတ်သားသောဒီဇိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်လော။
သူတို့သည် HTC One M9 / HTC Hima ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုပြသည့်ပြန်ဆိုချက်အချို့ကိုထုတ်ဝေသည်
သိသာထင်ရှားတဲ့သူတို့ကပဲပြန်ဆို, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဤကြောင်းအာမခံလို့မရပါဘူး HTC One M9 / HTC Hima ၏နောက်ဆုံးပုံစံပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းပေါက်ကြားခဲ့သောပုံများကိုမြင်ရသော်လည်း၎င်းသည် One range ၏နောက်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ၏ဒီဇိုင်းဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်နိုင်သည်။
ပြန်ဆိုချက်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သူသည် HTC One M9 / HTC Hima ကိုပိုမိုခေတ်မီပြီးအဝိုင်းလိုက်ထိတွေ့နေစဉ်၎င်း၏ထုတ်လုပ်သူများ၏ဒီဇိုင်းမျဉ်းကိုလိုက်နာသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ မီးမောင်းထိုးပြ သင်၏ BoomSound စပီကာများ၏အရွယ်အစားယခင်မော်ဒယ်များထက်အများကြီးသေးငယ်။
သို့သော်ပြောင်းလဲမှုကြီးများသည် HTC One M9 သို့မဟုတ် HTC Hima အတွင်း၌သာဖြစ်သည်။ ကောလာဟလများအရလာမည့်ထိုင်ဝမ်အလုပ်အကိုင်မြင်းတွင် ၅ မှ ၅.၂ လက်မအကြားရှိ resolution သည်5x 5.2 pixels ရှိသည်။
၎င်း၏ဆီလီကွန်နှလုံးကိုပရိုဆက်ဆာဖြင့်ပြုလုပ်မည် Qualcomm Snapdragon 810 ၎င်း၏ Adreno 430 GPU နှင့်3GB RAM တို့နှင့်အတူ။ Terminal တွင် internal သိုလှောင်မှု 32 GB ရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ သို့သော်၎င်းသည် micro SD ကဒ်များအတွက်အထောက်အပံ့ရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။
ကင်မရာသည်တစ် ဦး 20 megapixel အဓိကကင်မရာ, 13 megapixel မျက်နှာပြင်အပြင်ထုတ်လုပ်သူကိုခေါင်းကိုက်စေသည့် UltraPixel နည်းပညာမှရွေ့လျားသည်။ Android 5.0.2 L သည်ထိုင်ဝမ်မှထုတ်လုပ်သည့် Sense7အောက်ရှိ HTC Hima ကိုလှိမ့်ချရမည်ဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းနှင့်စတင်မည့်နေ့နှင့် ပတ်သက်၍ HTC One M9 ကိုမတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်တင်ပြလိမ့်မည်ဟုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်၎င်းကိုမျှော်လင့်နိုင်သည် Aprilပြီလတစ်လျှောက်လုံးဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ခဲ့တယ်၊ မေလနောက်ဆုံး။
ထို့အပြင်၎င်း၏ယခင်စျေးနှုန်းများကိုကြည့်ပါက HTC Hima ကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်လိမ့်မည် 699 ယူရို။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » ဤပြန်ဆိုချက်များသည် HTC One M9 / HTC Hima မည်သို့မည်ပုံအသေးစိတ်ကိုပြသသည်
No entiendo porque hace tan feo la camara …etc!Menos la pantalla es alucinante!
Secillamente spectacular! Como solo HTC sabe hacerlo…enhorabuena HTC!
ResponderaBennie
i think this looks sick … i mean seriously its looks awsome mannnn
Responderajhazim60@gmail.com
No veo por que dicen que la cámara está fea?! De que otra forma puedo haber sido con semejante sensor?! El diseño está increíble! Los botonesalos lados, disminuyeron el tamaño de los marcos, eliminaron la franja negra, mantuvieron micro sd y aumentaron cámara memoria ram y procesador… No se que piensan ustedes, pero este pinta como teléfono de 2015, y cuidado el más vendido! Esto no es ups, HTC lo hizo de nuevo, esto vaaser, HTC QUE HICISTE?! Haha es milagroso el diseño, espero que sea real por que si es así, juró que vendo mi LG y corroacomprarlo
ResponderaPQ
Diego Rueda ဟုသူကပြောသည်
ကျိန်းသေဒီထုတ်လုပ်သူကိုအကောင်းဆုံးရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်, ငါသည်ဤကျောက်မျက်အတွက်ငါ့ M8 ရောင်းပါလိမ့်မယ်။
Diego Rueda အားပြန်ပြောပါ
Es precioso 😛 Aunque me gustaría aún más si el cristal del sensor de la cámara fuera redondo y no cuadrado.
ResponderaDanix88
မင်းက Big Htc !!! အံ့မခန်း !! ဒါဆိုငါဝယ်မယ် !!
el problema es que «lean bien» dice (renders) ojalas fuera asi de verdad!!
pero siendo htc demas que si! 😀
ps: ထို Aifon6.. HTC M9 GENTLEMEN!
Samsung သည် Samsung Galaxy K Zoom ကိုဆက်ခံရန်လုပ်ဆောင်နေပြီးဖြစ်သည်